Kaominina Antehiroka : 5 t isaky ny hekitara ny voka-bary aloha | NewsMada
Kaominina Antehiroka : 5 t isaky ny hekitara ny voka-bary aloha
Nitombo avo roa heny ny voka-bary ao amin’ny kaominina Antehiroka ho an’ny vary aloa izay niakatra ny volana febroary lasa teo. « Nahazo vokatra 5 t isaky ny hekitara izy ireo satria tsara ny masomboly nampiasaina sady voafehy ny rano », hoy ny fanazavan’ny tantsaha iray, Randriantsara Jacques André, ny asabotsy lasa teo. Mety amin’ny tanimbary eny avokoa ny vary lava, vary gasy, X265… Indroa mamokatra ny tanimbary isan-taona, hojinjaina ny volana mey ho avy izao ny vary vakiambiaty. Amin’ny ankapobeny, natokana ho an’ny filan’ny isan-tokatrano ny vary vokatra fa tsy amidy akory. Mampiasa ny teknika Papri, SRI, SRA ny tantsaha hanatsara ny lanjan’ny vary isaky ny ha azo. Misy tantsaha 240 tokantrano mamboly amin’ny velaran-tany 170 ha ao Antehiroka.
Fetin’ny santa-bary ny asabotsy lasa teo ho an’ny kaomonina. Naverina indray ity fomba malagasy ity rehefa tafapetraka ho ben’ny Tanàna Razakandrainy Bezoro. Fanateram-bokatra ho an’ny mpitondra sy ny ray aman-dreny ny santa-bary ary tany amin’ny Repoblika voalohany no nampiharina farany izany teto amintsika, hoy ny fanazavan’ny ben’ny Tanàna.
Nanolotra masomboly 4 t ho an’ny mpamboly teny Antehiroka ny vadin’ny filoha, ka nandray ny santa-bary ny faran’ny herinandro teo ny solontenany ho fisaorana. Misy ny vary omena ao anaty harona mifanarona, eo koa ny santa-bary ho mariky ny fanajana ny ray aman-dreny. Mangataka zezika kosa izy ireo ho an’ny taom-pambolena manaraka.